S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny felam-paty mafana China Manufacturer
Description:S-Brilliance Micro Glass Beads,Kitapo misy menaka mikorisa ho an'ny felam-paty mafana,S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny Roadmarking
Home > Products > Sela Brilliant Glass > S-Brilliance Micro Glass Beads ho an&#39;ny felam-paty mafana
Model No.: Micro Glass Beads
Kitapo vita amin'ny vera, fantatra ihany koa amin'ny endriky ny vera, microspheres, na microparticles, dia efa nampiasaina nandritra ny 80 taona tamin'ny famantarana sy ny marika famantarana. Vitsy kely ny kavina niparitaka teo amin'ny tendrony misy pentina mba hamokarana dipilem-pitandremana mialoha ny famokarana labozia namboarina voalohany tamin'ny taona 1950. Kitapo glasy kely ihany koa dia manome famerenam-panafody ho an'ny marika famerenana an-dàlambe, anisan'izany ny loko sy ny famokarana marika izay ahafahan'izy ireo miboridana sy mahomby rehefa araraka amin'ny fampiasana azy eny amin'ny arabe. Ny lasopy vita amin'ny môtô mihoatra ny 100 microns dia nampiasaina hatry ny ela mba hampitombo ny fahitana ny loko.
Kitapo misy menaka mikorisa ho an'ny felam-paty mafana
1. Vorona masira dia ampiasaina amin'ny karazana fitaovana vaovao amin'ny sehatry ny fitaovana ara-pitsaboana ary ny tsy misy naolao, rubber, plastika, aerospace, sns., Toy ny famenoana fanampiana, fanatsarana, sns.
2. Kitaposin'ny gorodona ho an'ny mari-pamantarana eny an-dàlana dia afaka manatsara ny fahitana ny mari-pifaneranana sy ny mari-pamantarana eny an-dàlam-panafody ary manome fiantohana ny fiara fitondra amin'ny alina.
3. Fanosoran'ny rindrina toy ny fanangonana sy fitaovana fanampiny ho an'ny hetsika indostrialy dia azo ampiasaina eo amin'ny loko sy ny metaly, tsy simba ny loko, ary manatsara ny fahamarinan'ny asa. Toy ny: Hardware ho an'ny metaly, plastika, firavaka, ary zavatra hafa amin'ny fanadiovana sy fanararaotanam-pitsarana mazava tsara, izay matetika ampiasaina any an-trano sy any ivelany.
4. Kitapo lamba ho an'ny asa tanana, glasy glasy ary perla vita amin'ny ravina miloko no fitaovana tsara indrindra amin'ny fanontana lamba, famindrana hafanana amin'ny akanjo, hazo fanorenana katsaka, voankazo artifisialy, voninkazo artifisialy, fandrafetana ravin-trano, famokarana androogla.
5. Ny fitaovana fanoratana avo lenta dia fitaovana ilaina ho an'ny lamba fanenoman-damba, faniriana tariby, fanodinana simika, fitaovana dokam-barotra, fitaovana akanjo, sarimihetsika mandoko, tapa-taratra, famantarana marika, seranam-piaramanidina, hatsikana, kitapo, tany sy mpamonjy voina, mpiasa manao asa amin'ny alina.
6. Ny fasika masira dia toa kely tsy ara-dalàna, ampiasaina amin'ny famolavolan'ny fanenan-damba, toy ny solomaso, vazy, lampshade, ny fasika vita amin'ny birao 520-580 dia nozaraina miaraka amin'ny seza vita amin'ny glasy ary mamorona tontolon'ny tavy.
Product Categories : Sela Brilliant Glass
Ny fitaovana fandraketana an-tsarimihetsika maingoka Contact Now
Ireo fitaovana fanalehibiazina avo lenta ny jiro mitaratra fandrefesana Contact Now
Aashto-M247 Standards Screen Glass Glasses Contact Now
Fitaovam-pitaratra aforitra afara afara atsinanana Contact Now
EN1423 / EN1424 Fandaharan-tariby fanenan'ny zana-kazo Contact Now
Bs6088a / b Fiarovan-jiro miorina tsara tarehy S-Brilliance Contact Now
JIS R3301 Fahazavana S-Brilliance Glass Beads Contact Now
Fitsipika fanenon-jiro mitovitovy amin'ny S-Brilliance Contact Now
S-Brilliance Micro Glass Beads Kitapo misy menaka mikorisa ho an'ny felam-paty mafana S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny Roadmarking S-brilliance Glass Beads S-Brilliance Reflective Micro Glass Beads High Quality S-Brilliance Micro Glass Beads Micro Glass Beads BS6088 Micro Glass Beads